Fandaharana 10 hanatevin-daharana PDF maromaro ho iray | Famoronana an-tserasera
Fandaharana 10 hanatevenana ireo PDF maromaro ho iray
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana
Matetika isika dia mitahiry ny asantsika amin'ny PDF rehefa tsy mila manova intsony isika. Io no fomba tsara indrindra hiarovana ny antontan-taratasinao sy hanakanana ny fomba na ny endrika tsy ho very rehefa mizara izany amin'ny mpampiasa hafa. Na izany aza, endrika sarotra ny manitsy azy. Soa ihany, misy fitaovana amin'ny Internet mamela antsika hanova ireo karazana rakitra ireo, ka tsy te-hampiditra anototra, sonia na pejy aoriany intsony ny olana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilazako aminao ny sasany amin'ireo rindrambaiko ireo, manokana Hasehoko anao ny programa 10 hanatevin-daharana PDF maromaro ao anaty iray.
1 Tiako PDF
3 Fitaovana PDF24
4 PDF mora
5 Atambatra PDF
6 Fialofana PDF
9 Mpijery PDF-XChange
Tiako PDF dia programa an-tserasera maimaimpoana izay mamela haingana ny fanovana rakitra PDF. Misy a fitaovana isan-karazany tena ilaina izay mamela anao:
Amboary ho iray ny PDF maro ary apetraho amin'ny filahanao araka ny filanao.
Esory amin'ny PDF ny pejy ary tahirizo ho fisie fisarahana.
Mamehy PDF ka milanja kely kokoa nefa tsy manary kalitao.
Avadiho ho Word, PowerPoint na Excel ny rakitra PDF ary ny mifamadika amin'izany.
Amboary PDF, ampio lahatsoratra, sary na endrika
Manaova sonia PDF
Mamoha na miaro rakitra PDF
Ny zavatra tsara indrindra dia ny fampiasana ireo fitaovana ireo, tsy mila misoratra anarana akory ianaoMidira amin'ny tranokala tsotra fotsiny, safidio izay tianao hatao ary apetraho ireo rakitrao.
smallpdf programa an-tserasera izy io izay, ankoatry ny fananana fitaovana maimaimpoana, manolotra kinova premium miaraka amin'ny tombony bebe kokoa (ho an'ny 7,5 euro isam-bolana). Ny tanjon'ity rindrambaiko ity dia mandrindra ny asanao amin'ny antontan-taratasy, mahatonga ny asanao ho tsotra kokoa. Amin'ny Smallpdf azonao atao:
Amboary ny antontan-taratasy: asongadino ny ampahany amin'ny lahatsoratra ary ampio sary, endrika ary fanamarihana ao amin'ny antontan-taratasinao.
Manaova sonia antontan-taratasy sy fifanarahana, ary koa sonia fangatahana.
Mitambatra na mizara PDF.
Potsero ny PDF mavesatra, ka haingana sy mora kokoa ny mandefa azy ireo.
Ampidiro ny laharana pejy.
Hanova PDF ho Word, PowerPoint ary Excel.
Ny hany lesoka hitako miaraka amin'ilay programa dia, raha tsy misy ny fisoratana anarana pro, dia hetsika roa fotsiny no azonao atao isan'andro maimaimpoana.
Si mitady haingana sy mahomby ianao, ity no safidy tadiavinao. Fitaovana PDF24 dia lozisialy hanovana PDF izay mamela midira antontan-taratasy maimaim-poana. Manamora kokoa ny asa ny fahatsorany, mila misafidy miditra amin'ny PDF ao an-trano Tools PDF24 fotsiny ianao hisintona ny fisie rehetra tianao hidirana ao amin'ny efijery ary ny programa dia hanao azy ho azy ao anatin'ny segondra vitsy.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ity fitaovana ity dia, na dia tsy mila apetraka, manolotra kinova birao maimaim-poana, so afaka miditra amin'ny PDF ianao na dia tsy manana fifandraisana aza amin'ny Internet.
iray hafa Fandaharana an-tserasera sy miasa ho an'ny mpampiasa es PDF mora, io rindrambaiko io dia noforonina manokana mba hahafahanao manao ampidiro ny antontan-taratasinao tsy mila misoratra anarana, milamina sy haingana. Mamela manambatra antontan-taratasy mihoatra ny roa miaraka, amin'ny alàlan'ny fisintomana ireo fisie mankany amin'ny efijery fotsiny ary kitiho ny bokotra "join PDF". Azonao atao ny manafatra ireo antontan-taratasy avy amin'ny solosainao, na mivantana avy amin'ny Google Drive na Dropbox. Ankoatr'izay dia maimaim-poana tanteraka ary tsy misy fetran'ny fampiasana, azonao atao ny mampiasa azy imbetsaka isan'andro araka izay tianao.
Atambatra PDF dia programa maimaimpoana, tena mora ampiasaina ary izay mametraka eo am-pelatananao fitaovana matanjaka hanambatra sary na PDF ao anaty antontan-taratasy iray. Ho fanampin'izay, tsy mila manoratra na mametraka karazana programa amin'ny solosainao ianao raha hampiasa azy io. Azonao atao ny mampifangaro ireo rakitrao amin'ny fisintomana azy ireo eo amin'ny efijery na amin'ny fipihana ny bokotra "mampakatra", raha efa nampidirina izy ireo dia tsindrio ny "mix" ary afaka misintona ny PDF-nao ianao. Ny tena tiako indrindra amin'ity rindrambaiko ity dia mamela ny fampidinana rakitra 20 isan-karazany.
Fialofana PDF fampiharana tranonkala io izay manolotra fitaovana an-tserasera manodinkodina PDF maimaim-poana sy soa aman-tsara. Afaka mampiasa:
Avadiho ireo rakitra JPG ho rakitra PDF sy PDF ho JPG
Midira sy mizara PDF.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe dia izany rehefa manatevin-daharana ny rakitrao ianao dia afaka manova, azonao atao ny manodina azy ireo, mamafa azy ireo na manova ny filaharany. Ary, ao amin'ny fialofana PDF izy ireo ny fitaovan'ny mpampiasa izay manodina rakitra Raha novaina dia tsy ankininy amin'ny mpizara lavitra ity asa ity, ka mampihena ny loza mety hitrangan'ny hafa amin'ny antontan-taratasinao.
CleverPDF dia mpamoaka lahatsoratra PDF an-tserasera izany, ankoatry ny famelana anao manambatra PDF maro amin'ny iray, manolotra ny mety hanova saika ny endrika rehetra mametraka ao anaty PDF. Azonao atao ny manova ny antontan-taratasy Word, Excel, TIFF, Epub ... amin'ny tsindry iray monja. Ampifandraiso ireo rakitra samihafa amin'ity programa ity dia tena tsotra izany, manafà azy ireo avy amin'ny solosainao, Drive na Dropbox fotsiny. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manova ny filaharan'ny antontan-taratasy, mba ho voalamina mifanaraka amin'izay ilainao izy ireo.
Fitaovana hafa tena mahomby rehefa manambatra PDF dia PDF2GO. An-tserasera izy io, maimaim-poana ary, ankoatr'izay, mifanaraka amin'ny telefaona finday sy fitaovana hafa izy io, mila miditra amin'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny fitetezana mahazatra anao fotsiny ianao. Mba hanatevin-daharana PDF maro ao amin'ny PDF2GO dia alefaso ireo rakitra PDF te-hiaraka ianao dia azonao atao amin'ny biraonao, avy amin'ny Drive na Dropbox na mampiasa URL. Azonao atao ny manova ny filaharan'ny fisie misintona sy manamboatra azy ireo araka ny itiavanao azy. Raha tsindrio ny bokotra "vonjeo", hiditra amin'ny Safidy fitahirizana; Raha tsindrio eo amin'ilay tranokala ihany ianao, dia hatambatra ny antontan-taratasinao.
Mpijery PDF-XChange rindranasa birao io de manome fitaovana tsy misy farany natao hanatanterahana ny fanovana isan-karazany amin'ny rakitra PDF. Anisan'ireo fiasa maimaim-poana atolotray, ireto manaraka ireto dia miavaka:
Ovay ho rakitra amin'ny endrika hafa ny PDF, BMP, JPEG, TIFF, PNG, Teny ...
hametraka ny karazana rehetra annotations ary fanehoan-kevitra
Indrisy, hiditra PDF miaraka amin'ity programa ity dia mila mampidina ilay kinova pro ianao fa raha karamaina. Na izany aza, noho ny fahombiazany, raha hampiasa azy betsaka ianao ary raha hanararaotra ny ankamaroan'ny tombontsoa rehetra amin'ny programa dia mendrika izany.
Sejda dia fitaovana an-tserasera hanakambanana PDF, mandeha lavitra ary manolotra andiana hetsika fanampiny hanatsara ny rakitrao famaranana rehefa fisie hafa amin'ny programa. Ny zavatra tsara indrindra dia, ankoatry ny maha-fitaovana manara-penitra azy dia maimaim-poana ho an'ny antontan-taratasy hatramin'ny 50 pejy na 50 Mb ary raha mbola tsy mihoatra ny Asa 3 ao anatin'ny adiny iray.
Mora ny manambatra PDF miaraka amin'i Sejda. Voalohany, manafatra ireo rakitrao ary alaharo araka izay itiavanao azy. Avy eo ny programa dia hanome anao ny safidy ampio tsoratadidy, ampio fanamarihana ambany pejy, na mamorona tabilao anatiny. Rehefa vita izany dia mila mampidina ny valiny fotsiny ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fandaharana 10 hanatevenana ireo PDF maromaro ho iray